အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျသညျဖွဈလာတဲ့ မိနျးကလေး။ – SoShwe
Home/Other/အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျသညျဖွဈလာတဲ့ မိနျးကလေး။
အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျသညျဖွဈလာတဲ့ မိနျးကလေး။
So Shwe November 24, 2021	Other Leaveacomment
ရရှားနိုငျငံက အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျသာရှိသေးတဲ့ Daria Sudnishnikova အမညျရှိ ကလေးမလေးဟာ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျသညျဖွဈလာတယျလို့ သိရှိရကာ သူမရငျသှေးလေးရဲ့ ဖခငျဟာ သူမရဲ့ခဈြသူဖွဈပွီး အသကျကတော့ ၁၀ နှဈပဲရှိသေးတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျကွီးက တဈယောကျယောကျကပဲ လိမျညာပွောဆိုနတောလား? လူတှအောရုံစိုကျတာခံခငျြလို့ပဲ ဇာတျလမျးထှငျလိုကျရတာလား? ဆိုပွီး အပွဈတငျဝဖေနျခကျြတှေ ရှိလာပါတယျ။
Daria တဈယောကျ အသကျ ၁၃ နှဈနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျသညျဖွဈလာတဲ့သတငျးဟာ ကမ်ဘာအနှံ့ကို ပွနျ့သှားပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့တှမှော Daria ကို လူအမြားအပွားက သတိထားမိလာကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ Daria ဟာ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျအကောငျ့တှမှော တငျသမြှ ပုံတိုငျး ၊ ဗီဒီယို မှတျတမျးတိုငျးကို #Pregnant_at_13 လို့ ရေးသားထားတာကို တှမွေ့ငျရခဲ့ရပါတယျ။
ရရှားနိုငျငံပွညျတှငျးသတငျးဌာနတဈခုက Daria ဟာ လူမှုကှနျရကျမှာ လူတှရေဲ့အာရုံစိုကျခွငျးကို ခံရဖို့အတှကျ “Online Influencer” တဈယောကျအဖွဈ စတငျလှုပျရှားလာပွီး နာမညျကွီးကုမ်ပဏီတှနေဲ့ အလုပျတှဲလုပျလိုတာကွောငျ့ဖွဈတယျလို့ ထငျမွငျခကျြပေးခဲ့ပါတယျ။
Daria ရဲ့မိခငျဖွဈသူ Elena ဟာလညျး သလေုမွောပါး ကငျဆာဝဒေနာကို ခံစားနပေမေယျ့ ကိုယျဝနျလှယျထားရတဲ့ သမီးလေးအတှကျ ဒီကငျဆာရောဂါကို တတျနိုငျသမြှ တိုကျထုတျမညျဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Elena က “Daria ဟာ ခဏခဏအနျနတေော့ အစာအဆိပျသငျ့တယျလို့ပဲ ထငျခဲ့တာ။ ဆီးစဈတံနဲ့ စဈကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျဝနျရှိနတောကို သိလိုကျရတယျ။ ကြှနျမသမီးလေးက ငယျသေးတယျဆိုပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာ သူလှယျထားရတဲ့ ကိုယျဝနျကိုဖကျြခလြိုကျပွီး နောကျထပျကလေးမရနိုငျတော့မှာကိုလညျး စိုးရိမျတာကွောငျ့ ကိုယျဝနျကိုမခကျြခဖြို့ဆုံးဖွတျခဲ့ကွတာပါ။” လို့ အငျတာဗြူးမှာ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည်ဖြစ်လာတဲ့ မိန်းကလေး။
ရရှားနိုင်ငံက အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Daria Sudnishnikova အမည်ရှိ ကလေးမလေးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည်ဖြစ်လာတယ်လို့ သိရှိရကာ သူမရင်သွေးလေးရဲ့ ဖခင်ဟာ သူမရဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီး အသက်ကတော့ ၁၀ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြီးက တစ်ယောက်ယောက်ကပဲ လိမ်ညာပြောဆိုနေတာလား? လူတွေအာရုံစိုက်တာခံချင်လို့ပဲ ဇာတ်လမ်းထွင်လိုက်ရတာလား? ဆိုပြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်ချက်တွေ ရှိလာပါတယ်။
Daria တစ်ယောက် အသက် ၁၃ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည်ဖြစ်လာတဲ့သတင်းဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ကို ပြန့်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်တွေမှာ Daria ကို လူအများအပြားက သတိထားမိလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Daria ဟာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေမှာ တင်သမျှ ပုံတိုင်း ၊ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတိုင်းကို #Pregnant_at_13 လို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့မြင်ရခဲ့ရပါတယ်။
ရရှားနိုင်ငံပြည်တွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုက Daria ဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ လူတွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံရဖို့အတွက် “Online Influencer” တစ်ယောက်အဖြစ် စတင်လှုပ်ရှားလာပြီး နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်လိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Daria ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူ Elena ဟာလည်း သေလုမြောပါး ကင်ဆာဝေဒနာကို ခံစားနေပေမယ့် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ သမီးလေးအတွက် ဒီကင်ဆာရောဂါကို တတ်နိုင်သမျှ တိုက်ထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Elena က “Daria ဟာ ခဏခဏအန်နေတော့ အစာအဆိပ်သင့်တယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ ဆီးစစ်တံနဲ့ စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာကို သိလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မသမီးလေးက ငယ်သေးတယ်ဆိုပေမယ့် အခုအချိန်မှာ သူလွယ်ထားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချလိုက်ပြီး နောက်ထပ်ကလေးမရနိုင်တော့မှာကိုလည်း စိုးရိမ်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ကိုမချက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။” လို့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous Porsche နဲ့ပူးပေါငျးကာ ဒီဇိုငျးဆနျးသဈတဲ့ Laptop အသဈကို ပှဲထုတျလိုကျတဲ့ Acer
Next သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ လူဦးခေါငျးထဲမှ အင်ျဂါအသဈတဈခု။